Real Madrid ayaa weyday labo ciyaaryahan oo muhiim ah
Zinedine Zidane ayaa weyn doona midkood Dani Carvajal ama Luka Jovic kulanka khamiista ee Super Cup-ka Spain ee ay la ciyaarayaan Athletic Bilbao.
Tababaraha Liverpool Klopp iyo dhigiisa Burnley
Shaxda Liverpool vs Burnley – Klopp
Labada ciyaaryahan ayaan ka soo kabsan dhaawacyadii ay qabeen waxaana durba laga saaray ciyaartii ay kooxdoodu barbaraha la gashay Osasuna toddobaadkan.
Real Madrid ayaa u safartay Malaga iyagoon dib ugu laaban Madrid sababo la xiriira cimilada oo xun.
Dani Carvajal ayuu dhaawac ka soo gaadhay muruqa kulankii Celta Vigo todobaadkii hore halka Jovic uu soo gaadhay dhaawac muruqa ah intii lagu jiray tababarka.
Daafaca midig ee reer Spain iyo weeraryahanka reer Serbia ayaa labadoodaba laga saaray kulankii Pamplona ee Champions League ee ay wajaheen Real Madrid duruufo kala duwan awgood. Carvajal ayaa la ganaaxay ka dib markii uu soo qaatay shan kaar halka Luka Jovic uu soo gaadhay muruqa muruqa.
Dani Carvajal ma uusan awoodin inuu tababar joogto ah la qaato saaxiibadiisa isla markaana Zinedine Zidane ayaa madax xanuun dareemay si loo yareeyo dookhiisa dambeedka midig ee Lucas Vazquez kulanka labaad oo xiriir ah.
Haddii Real Madrid ay u gudubto finalka, waxay wajihi doonaan midkood Barcelona ama Real Sociedad Arbacada, iyadoo finalka Sevilla.
Maqnaanshaha Carvajal, marka lagu daro Lucas Vazquez waxaa noqon doona Nacho Fernandez, halka Luka Jovic uu durbaba kursiga keydka fadhiyay ka hor Benzema, Mariano Diaz iyo dhowr iyo toban ciyaartoy oo kale, waxaana ugu dambeysay oo la soo bandhigay bishii Nofeembar 8. ayaa yimid sideedii daqiiqo ee ugu dambeysay guuldaradii 4-1 ee ka soo gaartay Valencia, iyadoo seddex gool laga dhaliyay rigoorada iyo gool uu iska dhaliyay Raphael Varane.
axadle 6020 posts
Silsiladii Waa kuma? Cabdinaasir Guuleed oo ka mid ah
Aspect Results of Consuming Too A lot Oatmeal, In accordance